सिन्धु शब्द सरोवर Sindhu Sabda Sarobar: 2013
Pic Source : glittergraphics, internet
क्रान्तिको रक्तरन्जित खोलो
फेरी बौरिएर मुटुको ढिक्कामा परिवर्तन हुन्छ
र चिहान उठ्छ, हतियार बोकेर
मान्छे मान्छे भएर उठ्छ ।
मान्छे इतिहास भएर उठ्छ सत्यको खातिर !
फेरी विस्थापित हुन्छ
जे होस् चिहान उठ्छ ।
ढुङ्गा जस्तै साह्रो पारेर मुटु
समयको सम्पूर्ण अधिकार
बिद्रोहको तुफान भएर उठ्छ ।
सिङ्गै कथा जन्माउँछ
बज्रिन्छ असन्तुष्टिका भाग्य रेखा
शरीरबाट रगतका छिटा
उच्छिट्टिएर आकार बन्छ देशको
आकार बन्छ मुस्कानको
चिहान क्रान्तिका लागि उठ्छ
चिहान शान्तिका लागि उठ्छ
Posted by sabina sindhu at 12:44 AM3comments:
लामखुट्टे र कार्यशाला
हामी बिमा बालकथा लेखनको लागि बलथली भिलेज रिसोर्ट, काभ्रेमा थियौँ । दिइएको समय जम्मा तीन दिन थियो । पहिलो दिन हामीले कथा लेखेनौ‌ । बल्ल दोस्रो दिन लेख्यौ‌ । सबैको कमेन्ट गर्नुभयो रमेश सर र बिनय सरले । आखिर कथा फाइनल भयो । मैले चाहीँ तेस्रो पक्षको बिमालाई फोकस गरेर लेख्‍न खोजेको थिएँ । दिदी इन्दिरा दलीको देश बाहिरका भ्रमणका अनुभवहरु सुनेर सारै रमाइलो लाग्यो । साथीहरु धेरै जना हुनुहुन्थ्यो । बहिनी पलपलको पलपल साथ । अनुराधा शर्माजीले सुनाउनु भएका कुरा । विजय दाइको अत्याउने बानी । हलमा र खाना खाने समयमा लामखुट्टेको टोकाइ । नेत्र,उत्तम,श्याम,केशरी जस्ता साथीहरु । अनन्त दाइ,गिता,ललिता र सुधा त्रिपाठी --दिदीहरु । हलमा अलिअलि लामखुट्टेको धुपको बास्ना । जिवन परिवर्तन गर्न सक्ने भिडीयो । रमाइलो गरी नै पढीयो र लेखियो पनि । नयाँ कुराहरु जानियो । त्यस बिषयवस्तुमा राम्रो कथा बन्दैन होला भन्ने सोचेपनि आखिर कथा बन्यो नै ।
Posted by sabina sindhu at 11:49 PM 1 comment:
भाषण छाँट्नु छैन !
Photo Source :http://st.depositphotos.com/
प्रकाशित नेपाल साप्ताहिक
अनावश्यक विरोध गर्नु छैन कसैको,
फरक मत विचार र मान्यतामा
अबरुद्ध गर्नु छैन कसैको वैचारिक स्वतन्त्रता ।
अन्धाधुन्द उर्लिएको अर्थहिन जुलुसमुनि
किचिनु छैन ।
बिर्सिएर आफ्नो स्वाभिमान कुनै पार्टिको
झण्डा समाउनु छैन ।
भट्याउनु छैन कुनै ‘जिन्दावाद’ र ‘मुर्दावाद’ का नारा
न त गाउनु नै छ कसैको स्तुतिगान ।
पतन भएकाहरुको लिस्टमा पर्नु छैन मलाई ।
सफल हुननसक्ने नाटकमा झैं
कुनै कमजोर कलाकारको अभिनय गर्नु छैन ।
हेर्नु छैन मलाई डेट सक्किएको पूरानो क्यालेण्डर
खुम्च्याउनु छैन भग्नावशेष बनेको त्यो समय
मलाई निन्दाको पात्र बन्नु छैन ।
भाषण छाँट्नु छैन भाडाको माइकमा
न सम्झनुछ रङ्गहीन पुरानो तस्विर
खिल्ली उडाउनु छैन कसैको ।
थाहा छ जनताका कठिन संघर्षका समयहरु
अहँ बल्झाउन चाहान्न, दुखेको घाऊ ।
अनाहकमा न त विरोध गर्नुछ कसैको
न त समर्थन ।
अनावश्यक जान्ने बुझ्ने देखाएर
समय भन्दा धेरै अगाडि कुद्नु छैन,
कुनै जुझारु नेता झै भाषण छाँट्नु छैन ।
सत्य कमरेड मलाई निन्दाको पात्र बन्नु छैन ।
Posted by sabina sindhu at 10:57 PM No comments:
प्रेमी शहरको उज्यालोमा
यौवनका मुस्कुराहट साटिरहेकी छ्यौ ।
खेती गरिरहेकी छ्यौ आफ्ना कथाहरुको ।
मेरी लोरिमा !
आगो बाँचेर पानी निल्ने
हृदयमा क्षितिज अटाएर
अघ्रिरहेकी छ्यौ स्वर्णीम धड्कनहरुमा ।
महल ठड्याएर गाँसिरहेकी छ्यौ
टेबुलभरी पसारिएका अनियन्त्रित
सागर छिचोलेर परेलीहरुबाट
बालुवाका शहरहरु ओसारिरहेकी छयौ ।
हराइरहेकी छ्यौ वर्षातका भेलहरुमा
नबुझिने इतिहास कोरिरहेकी छ्यौ
अँधेरी रातमा ।
सपनाहरु कमजोर हुन्छन् लोरिमा !
भावनाका फूलहरु, फूल होइनन्
सपनाका बघैंचाहरु , महल होइनन् ।
स्वच्छन्द उभिनु स्वतन्त्रता होइन ।
उभ्याइएका स्तम्भहरु , ताजमहल होइनन् ।
असरल्ल फिँजाएर तन्नेरी छालहरु
केबल गुन्गुनाइरहेकी छ्यौ
प्रेमका सुमधुर गीत
कतै नबज्रियोस् पहाड तिमी माथि
नभाँच्चियोस् तिमीले चढ्न चाहेको सिँढी
नभत्कियोस् तिम्रो सपनाको ताजमहल
र चोट नलागोस्,
लम्कन चाहाने गोडाहरुमा ।
Posted by sabina sindhu at 11:17 PM No comments:
कुनै कालखण्डमा, न्यायालय अगाडि उभिएर
Pic Source : httpwww.patrol-log.com.jpg
प्रकाशित: मधुपर्क मासिक
श्रीमान् ! मेरो लोग्ने पेशेवार सर्जक
अनधिकृत शब्दहरुमाझ दिनदहाडै हत्याकाण्ड मच्चाएर उभिन्छन्,
विचारको कारोवार गर्छन् ।
आस्थाको पूनर्योग गर्छु र ठम्याउँछु
दुई सुकाको माया धेरै अघि उनले मसँग साटेको ।
विचार साट्ने उनको कलमलाई घृणा गर्छु श्रीमान !
सर्जककी स्वास्नीहुनुको पीडा दाउराहरुमा मिसाएर
आगोसँगै बाल्छु ।
तर पनि श्रद्धा चढाएर माग्छु उनको सफलताको वरदान ।
सम्पादकबाट अस्विकृत उनका विचार,
टेबुलमाथि राखी थिचिदिन्छु ‘पेपरवेट’ ले ।
घरभित्रै हुर्किन्छन् धेरै कथा र अपहेलित हुन्छन् ।
पढेकी छु दुई—चार अक्षर अहँ आधुनिक युवती बन्न सक्दिन ।
कहिले काहीँ मेरो माया चोर्ने उनको पुस्तक देखि ईश्र्या लाग्छ ।
आफैं टाँस्सिउँ जस्तो लाग्छ उनको अक्षरमा र उनका किताबहरुमा
एकपटक हेरुन् मेरो जिन्दगी अनि वाक्यसँगै पढुन्
र महशुस गरुन् ।
घरी—घरी सम्पादकबाट अस्विकृत विचार देखेर,
अहँ म सहन सक्दिन उनको न्याउरो अनुहार ।
अँगेनाको डिल नजिकै बसेर फरियाको सप्कोले पुच्छु आफ्नो आँशु,
थाहा छ, श्रीमान्,
म उनको शब्दलाई होईन उनलाई प्रेम गर्छु ।
Posted by sabina sindhu at 12:45 AM No comments:
माफ गर्नुहोस् महाशय
Pic Source : www.careerfaqs.com
प्रकाशित: नागरिक 'अक्षर'
माफ गर्नुहोस् महाशय,
कुनै ‘कथित सत्य’ (हरु) धु्रवसत्य होइनन् ।
दाखिला हुन आएका सामाग्री, ती नमूना होइनन् ।
कसले बनायो मिथ्या प्रमाण, लगायो अड्डाको छाप ?
कसले किर्ते गर्‍यो हाकिमको सही ?
कसको रोहवरमा बोल्यो सबुद !
कसले गर्‍यो अक्षरमा केरमेट ?
भ्रमपूर्ण रुपले जनायो ब्यक्तीको पहिचान !
कसले राख्यो पक्ष र विपक्ष बीचमा साक्षी ?
अहँ म देख्दिन शंख वा चक्र अङ्कित भएको
औंठाको प्रष्ट पहिचान ।
किन लेखियो मनगणन्ते लेखाई ।
बुझ्नै सकिन, कसले किर्ते गर्‍यो हाकिमको सही ?
Posted by sabina sindhu at 3:54 AM No comments:
प्रकाशितः मिर्मिरे मासिक
तान्या, इन्द्रकमल र अन्धकार
″बाहिर दलिनमा झुण्डिएका सुनाखरीका पातहरुको छायाँ तान्याको आधा अनुहारको पाटो ढाकेर हल्लिरहेथ्यो । निकै रहस्यमय थियो समय । तान्याको यौवनजस्तै रन्थनिएको ब्रह्मपुत्र, केही पर बालुवामा मुख गाडी केही ताल ओर्ली भित्रभित्रै उर्लिँदै बगिरहेको देखिन्थ्यो ।"— तान्या इन्द्रकमल र अन्धकार कथा सङ्ग्रह भित्रका अंश हुन् यी । म पात्र अजित शाक्य रसियाली ब्याले नृत्य दलकी सदस्य तान्या किर्सानोभा अर्थात तानेच्कासँग परिचय गर्छन् । भौगोलिक सिमाको विविधता भएपनि मान्छेमा प्रेम, सद्भाव र मित्रताका साझा भावनाहरु हुन्छन् भन्ने निश्कर्ष कथाले निकाल्छ । ब्रम्हपुत्र, गङ्गा र काबेरीमा जस्तै पेजोरा र लेनामा पनि पानी नै बग्छ । देश भिन्दै भएपनि खेतबारीमा अन्न नै उब्जिन्छ । त्यहाँ ईश्वरत्वको चमत्कारले अरु केही विशेष फल्ने—फुल्ने होइन । त्यतिमात्र होइन, मान्छेका विवशता र दुःखका कथाहरु उस्तै हुन्छन् । कविता, कथा र नाटक तीनै विधामा कलम चलाउने अविनास श्रेष्ठको यो पहिलो कथाकृति हो । बि.सं २०३० सालमा 'कोलाहलमा डुबेको एउटा महानगर’ कथा प्रकाशित भएपछि उनको कथा लेखन यात्रा सुरु भएको हो । ‘तान्या, इन्द्रकमल र अन्धकार’, ‘अन्ततः निरुपमा’, ‘ललिता बाहिर रात परेको छ’ ,‘राक्षस’,‘जुनेली रातकी द्रोपदी’,‘समुन्द्र’, ‘छायाँको पछि’, ‘मृत्युः तिमी अनि केही उदास गीतहरुमा अल्झेर’,‘घर कहाँ छ आनो घर ?’, ‘मायाजाल’ र अस्तित्व गरी ११ कथाहरु सङ्ग्रहित छन् । यी कथाहरु, प्रचलित नेपाली कथाहरु भन्दा भिन्न स्वाद, स्वरुप र बान्किका लाग्छन् । कथाकार आसामी भाषाका साहित्यकार शैयद अब्दुल मलिक, वीरेन्द्र भट्टाचार्य, होमेन बरगोहाई, सौरभ चालिहा, आदिबाट प्रभावित देखिन्छन् । बि.सं २०३२ साल देखि २०४२ सालसम्म विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भईसकेका यी कथाहरुमा अभावग्रस्त जिन्दगी बाँचिरहेको एक्लो, अभिभावकविहीन युवकले देखेको जिवनको पृष्ठभुमी छ । छरिएका कथाहरु तीन दशकपछि मात्र संग्रहको रुपमा आउनु कथाकारको दुर्भाग्य हो । शब्द धाराप्रवाह बगेको हुँदा भाषामा सन्तुलन देख्न सकिन्छ । ‘अन्ततः निरुपमा......’ मा सत्ताईस वर्षे युवक ‘नीलाम्बर’ एकचालिस वर्र्षकी विवाहित महिला ‘निरुपमा’ को प्रेममा पर्छन् । सत्र—अठार वर्षकी निरुपमाकी छोरी ‘मीनाक्षी’ निलाम्बरसँग नजिकिन खोज्छिन् । कथाको अन्तमा, नीलाम्बर मीनाक्षीका लागि नभई आफ्नो लागि न्याय गर्छन् । ‘ललिता बाहिर रात परेको छ’ कथामा ललिताप्रति आशक्त पुरुष ‘यदु’ निसंकोच आङ्खनी पूर्व पत्नी महालक्ष्मी मास्केका बारेमा बताउ“छ । लोग्ने स्वास्नी नरह“दा पनि ती दुबै स“गै बस्छन् । एक अर्काका ‘बेष्ट फ्रेण्ड’ हुन्छन् । कति हलुङ्गो तरिकाले आङ्खनो विवाह र पारपाचुकेको कुरो उसले ललितालाई सुनाउँछ मानौं यी सबै सधै भईरहने सामान्य कुरा हुन् । ‘अस्तित्व’ कथा काठमाडौंको ऐतिहासिक साहित्यिक परिवेशलाई आधार बनाएर लेखिएको प्रयोगवादी कथा हो । साहित्यिक पाठकलाई लक्षित गरिएको यस प्रयोगवादी कथा सामान्य पाठकलाई बुझ्न मुस्किल पर्छ । रत्न पुस्तक भण्डार, बागबजारले प्रकाशनमा ल्याएको यस सङ्ग्रहको मुल्य रु १ सय पैंतालिस राखिएको छ ।
Posted by sabina sindhu at 1:59 AM No comments:
प्रकाशितः मिर्मिरे मासिक ...